सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीले चढ्ने कार, को बढी शक्तिशाली ? यसैले छुट्याउँछ पहिचान – Khabar Silo
एजेन्सी- असोज अन्तिम साता चिनियाँ राष्टपति सी जिनपिङ भारत हुँदै नेपालको भ्रमण गरेर फर्किए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेर काठमाडौं आइपुगेका उनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेका थिए । जुन भेटवार्ता र भ्रमणले संसारभरका मिडियामा सबैभन्दा मुख्य समाचारहरू बनाइदियो ।
मोदी र सी दुबै विश्वव्यापी राजनीतिमा शक्तिशाली नेताहरू हुन्। सी विश्वमा उदाउँदै गरेको विश्वमहाशक्ति राष्टको नेता हुन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि ती छानिएका विश्वव्यापी नेताहरू मध्ये एक हुन्। जसको लोकप्रियता सोशल मीडियामा पनि उच्च स्थान छ ।
आज हामी तपाईंलाई प्रधानमन्त्री मोदी र शी जिनपिंगले चढ्दै आएका कारहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछौ । यी दुबै नेताहरू जस्तै उनीहरूका कारहरू पनि शक्तिशाली र सुविधा सम्पन्न छन्। यसपछि, तपाईं आफैले निर्णय लिन सक्नुहुनेछ कि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चीनका राष्ट्रपतिको कारमा कसको बढी खतरनाक र शक्तिशाली कार होला ?
यस्ता छन् यी कारका विशेषताः
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीएमडब्ल्यू7Series 760 Li High Security Edition मा सवार छन्। यो कार आफ्नो सुरक्षाका लागि विश्वमा चिनिन्छ, जसलाई गोली र बमले असर गर्दैन।
BMW7Series मा 44 क्यालिब्रेसन म्याग्नुम ह्यान्डगन्स र एके 47 जस्ता स्वचालित हतियारहरूले आक्रमण गरेपनि यस भित्रको मान्छे बच्न सक्छ। यसमा २० इन्चको बुलेट प्रूफ टायर हुन्छ जसमा बुलेटले असर गर्दैन। यसबाहेक यसमा ग्यास र रासायनिक आक्रमणको समेत कुनै प्रभाव पर्दैन। यसको अक्सिजन आपूर्तिमा किट पनि प्रदान गरिएको छ। यसको मतलव यो कार चलिरहेको ट्रयांक हो ।
पीएम मोदीले २०१० रेन्ज रोभर एचएसईको पनि प्रयोग गर्छन् । यसको मानक संस्करणमा जगुआरले ५.० लिटर, सुपरचार्ज भी८ इञ्जिन प्राप्त गराएको छ । यस गाडीमा पनि बुलेट र बमले केही असर गर्न सक्दैन।
ल्याण्ड क्रूजर भारतमा टोयोटाको सबैभन्दा महँगो कार हो । यसमा पावरको लागि ४.५, ४.५ लिटरको भी ८ इन्जिन हुन्छ । यो कार पनि प्रधानमन्त्री मोदीले प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिंग र उनको कार
चिनियाँ राष्टपति सीको कार पनि अत्याधुनिक रहेको देखिछ । विश्वका शक्तिशाली नेताहरुमध्ये एक सीका लागि गरिने सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त र भरपर्दो हुने गरेको छ । त्यसैले उनले चढ्ने कार पनि निकै सुरक्षित र भरपर्दो रहेको अन्तर्राष्टिय सञ्चारमाध्याहरुले जनाएका छन् ।
त्यसैले मानिसहरुलाई यो कारका बारेमा धेरै कम जानकारी छ । राष्टपति सीले चढ्ने यो कार कहिँ बेचिदैन । चीनमा राष्टपति सीबाहेक अरू कुनै व्यक्तिले यो कार किन्न सक्दैन। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चढेको कारको नाम हो ‘Hongqi N501’। यो कारको बारेमा कार निर्माता कम्पनी Hongqi को आधिकारिक वेबसाइटमा समेत कुनै जानकारी दिइएको छैन।
यो कारमा गोली र बमले कुनै प्रभाव पार्ने छैन। यसमा ४.० भी ८ को इन्जिन लाग्छ । यो गाडी १८ फिट लामो छ । यो कारमा ठूलो ईन्धन ट्यांक रहेको छ । जानकारी अनुसार Hongqi चीनको लक्जरी कार निर्माता कम्पनी हो । चीनमा यस नामको अर्थ रातो झण्डा हो, जुन वामपन्थीको पहिचान हो।
यो कारको ठूलो क्रोम ग्रिल छ भने यसको केबिन एकदम ठूलो छ। यसमा धेरै प्रिमियम सुविधाहरू रहेका छन् ।
राष्टपति सी असोज अन्तिम साता नेपाल आउँदा यो खालको कार प्रयोग नगरिएपनि पनि यसरी नै सुरक्षा सतर्कता अप्नाइएको थियो । चाइना एयरको विमानमार्फत काठमाडौं आएका चिनियाँ राष्टपति सी आउनुभन्दा एक दिनअघि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको विमानले त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलको रिक्की गरेको थियो ।
विश्‍वभर आज : कश्मीरमा शक्तिशाली भूकम्प, बेलायती राजनीति कता मोडिएला ?
इन्डोनेसिया : इन्डोनेसियाको दक्षिणी पपुवा क्षेत्रमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा २६ जना मारिएका छन् । प्रहरीले आन्दोलन दबाउन गोली प्रहार गर्दा २६ प्रदर्शनकारीको ज्यान जानुका साथै दर्जनौं घाइते भएका छन् । राष्ट्रिय प्रहरी प्रवक्ता डेडी प्रासेतोका अनुसार अघिल्लो दिनको झडपमा एक प्रहरी अधिकृतको पनि मृत्यु भएको छ । इन्डोनेसियामा केही सातादेखि सरकारविरोधी आन्दोलन चर्किँदैछ । […]
काठमाण्डौ – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित सबैभन्दा धेरै देखिनु सम्मानको कुरा भएको तर्क गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले सङ्क्रमितको संख्या बढि देखिनुमा आफ”हरुको कोरोना परीक्षणको अवस्था राम्रो भएको बताउनुभयो । ह्वाइटहाउसमा राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयो ‘हाम्रो परिक्षण अरुको भन्दा निकै राम्रो छ, यसैलेसङ्क्रमितहरु पहिचान भएका हुन्, यसलाई म सम्मानको रुपमा लिन्छु ।’ […]
काठमाडौं । कोरोनासँग डराउदिन भन्दै बिभिन्न मास्क समेत नलगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरी अर्को हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले कोरोना भाइरसको तत्काल चर्चहरू खोलेर प्रार्थाना जरूरी भएको बताएका छन् । ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले चर्चहरु बन्द गर्नुको सट्टा तुरुन्त खोल्नु पर्ने बताए । ‘अमेरिकामा धेरै प्रार्थना आवश्यक छ, थोरै होइन, उनले […]
‘कुली नम्बर–१’को सुटिङ छाडेर श्रीलंका पुगिन् सारा